IZINDABA & IZENZAKALO |
IZINGANE ZOMA 2019
Amandla we-NPMA akhona emandleni ethu okuhlanganisa bonke abadlali ababalulekile ekuphathweni kwezinambuzane minyaka yonke ePestWorld. Njengomcimbi omkhulu kunayo yonke embonini yokuphathwa kwezinambuzane emhlabeni, ayikho nje ingxenyekazi engcono ongayethula ngezinsizakalo nemikhiqizo emisha ...Funda kabanzi »
ITelex Environmental Trading Co., Ltd. (Igatsha laseJinglong) selijoyine i-NPMA.
Ngokuthuthukiswa kweJinglong, ukuhlanganiswa kwethu kwamukelwa ngamakhasimende aya ngokwanda emhlabeni jikelele. Sekuyisikhathi esifanele sokuqhubeka nokuhamba! I-Jinglong (Telex) izohlala ikhona noma kunini lapho unesidingo! Funda kabanzi »
I-FAOPMA 2019 - Korea
Uyemukelwa ukuhlangana noJinglong ku-FAOPMA 2019. Eminye imikhiqizo emisha izophuma. Imininingwane yedokodo injengezansi: Booth: A06 Usuku: 24 (Lwesibili) - 26 (Thu) Septhemba, 2019 Indawo: 1F Exhibition Hall, DCC (Daejeon Convention Centre), Daejeon, Korea Funda kabanzi »
Kuboniswa ku-PestEx 2019
Inhlangano enkulu kunazo zonke yase-UK yokulawula izinambuzane emele izinkampani ezingamalungu ezingama-700 futhi ixhumana nezinkampani ezingama-3,000 ezixhumene nazo. Imicimbi yethu ithuthukiswa kuyo yonke omagazini abalawula izinambuzane, kanye nemikhakha eminingi ehambisana nayo. Funda kabanzi »
I-6th Edition ye-Italian Pest Control Exhibition izokwenzeka ngomhla ka-06 no-07 Mashi 2019 eMilan Convention Centre eyaziwa kahle futhi ehlonishwayo (eMiCo 1st floor) Amahora okuvula: NgoLwesithathu Mashi 06th 2019 kusuka ngo-9.00 ekuseni kuya ku-6.00pm ngoLwesine Mashi 07th 2019 kusuka ku-9.0 ...Funda kabanzi »
Bamba iqhaza eParasitec Paris 2018 Aug. 30, 2018
Indawo entsha ilabhorethri engcono kakhulu yezinkampani ezisabalalisa izinambuzane nabasabalalisi bazo. Ngopharetha nabakhiqizi abangochwepheshe abavela emazweni angaba ngu-30, iParasitec Paris, eyayinezivakashi ezingaphezu kuka-2,800 engqungqutheleni edlule, iyaqhubeka nokuba yisethenjwa ...Funda kabanzi »
I-China International Safety and Quality Conference 2018
Eminyakeni eyi-11 eyedlule, iNgqungquthela ye-CIFSQ iqoqe ngokubambisana ngaphezu kuka-8,000 ochwepheshe bezokuphepha kokudla kanye nochwepheshe abavela emazweni angama-30 +. Sibheke phambili ekwamukeleni ngo-2018. Ukuhambela Ingqungquthela YaseChina Yezokuphepha Nekhwalithi (CIFSQ) yingqungquthela ...Funda kabanzi »
Sikhombisa ku-FAOPMA 2018 kulo Septhemba
I-Federation of Asian and Oceania Pest Managers Associations yinhlangano engenzi nzuzo eyasungulwa ngo-1989 ngamalungu aqhamuka emazweni ase-Asia nase-Oceanic ukukhuthaza nokuthuthukisa umkhakha wokulawulwa kwezinambuzane ochwepheshe esifundeni sonke. ...Funda kabanzi »